दल स्टोर Giovanni Botticelli पुरुष भव्यता र परिष्कृत स्वाद दुवै संयोजन कि लुगा एक संग्रह हो। यो इटालियन डिजाइनर कुनै पनि साँचो सज्जन को योग्य उत्पादनहरू ब्रांडेड।
ब्रान्ड को उद्भव को इतिहास
गतिविधिहरु Giovanni Botticelli ब्रान्ड पुरुषहरु फैशन रुझान पहिलो परिवर्तन छँदा गत शताब्दीको बीचमा थाले। वस्तुतः रातारात मानिसको शैली को आधार शान, सरलता, सान्त्वना र austerity देखियो। को 50s मा, एक उच्च कलर लोकप्रिय शर्ट एक क्लासिक टाई संग संयुक्त भयो। Giovanni Botticelli अप यो प्रवृत्ति छनोट गर्न निर्णय र नेकटाई र स्कार्फ बेच्न थाले। बिस्तारै ग्राहकहरु प्रतिभाशाली डिजाइनर उहाँलाई मात्र होइन सामान आदेश सुरु, तर पनि शर्ट। र 1958 मा यो पहिलो स्टूडियो ब्रान्ड खुलेको छ।
अब ब्रांडेड शोरूम तपाईं कपास बनेको कार्यालय शर्ट, नेकटाई, microfibre र रेशम, बुना भयो कपडा र शर्ट को एक विस्तृत विविधता पाउन सक्नुहुन्छ। साथै, स्टोर कुनै पनि सज्जन स्कार्फ, स्कार्फ, bow-टाई र कफ लिंक तपाईँको लिङ्कमा।
रूस मा Giovanni Botticelli ब्रान्ड
रूस मा, इटालियन व्यापार चिह्न यस शताब्दीको सुरुमा देखा पर्नुभयो र चाँडै यसको प्रशंसक फेला परेन। र अहिलेसम्म Giovanni Botticelli पहिलो स्टोर, मास्को मा धेरै मानिसहरू लक्जरी सामान र शानदार गुणवत्ता को वस्त्र किन्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्न आनन्द दिन्छ।
उत्पादन Giovanni Botticelli चाँडै रूसी व्यवसायी आपत्ति आए र देश मा आफ्नो पहिलो स्टोर खोल्ने पछि तीन वर्ष भित्र आफ्नो नम्बर पन्ध्र वृद्धि। ब्रान्ड घरेलू बजार मा थप सार्न एक मौका दिने, को कपडे को शैली र गुणस्तर बुझ्न लक्षित दर्शक सक्षम।
तीन वर्ष पहिले राजधानी गरेको केन्द्रीय विभाग भण्डारमा आफ्नो पहिलो बुटीक Giovanni Botticelli डिजाइनर संग्रह पूर्ण दायरा उत्पादन भएको छ। तर यस्तो विभिन्न शैलीहरू र आकार को सम्बन्ध रूपमा जहाँ तपाईं मात्र ब्रान्ड-नाम सामान खरिद गर्न सक्नुहुन्छ पसलहरूमा, छन्।
प्रत्येक सिजन संग्रह स्टोर अद्यावधिक, निर्माता प्राकृतिक रेशम, Microfiber, कृत्रिम फाइबर वा उच्च गुणवत्ता ऊन बनेको नयाँ सामान आयात गरिन्छ। यी सामाग्री स्थायी टाई गठन बनाउँछ।
शर्ट Giovanni Botticelli
शर्ट - फैशन बुझ्नुहुन्छ र स्टाइलिश brevity कदर गर्ने कुनै पनि व्यापार मानिसको दराज को एक आवश्यक तत्व। विविधताको दायरामा पहिलो पृष्ठ देखि Giovanni Botticelli को सूची विस्तार देख्न सकिन्छ। यहाँ विभिन्न रंग भेरिएसनहरूमा र विभिन्न आकारहरू silhouettes छन्। प्रसिद्ध इटालियन डिजाइनर देखि पुरुषहरु शर्ट को मोडेल सफलतापूर्वक सान्त्वना र स्वतन्त्रता, परम्परागत शिल्प संयोजन र originality समाधान दर्जी।
संग्रह Giovanni Botticelli - मात्र क्लासिक, तर पनि थप आकस्मिक वस्त्र विकल्प छैन। सबै ब्रान्ड प्रशंसक नै समय मा स्वतन्त्रता र सान्त्वना महसुस ग्राहकहरु यसको गुणस्तर र सान्दर्भिकता लागि यो कदर!
पोशाक "Valentina": आधुनिक दाखिला को uncompromising शान
खैरो जिन्स: लगाउन के र रोचक समाधान
गर्भावस्था को समयमा kiwi फल खाने
प्रेस छेउमा कसरी निर्माण गर्न
सेक्स को लागि इन्सुलेशन: सही कसरी चयन गर्ने? underfloor ताप लागि इन्सुलेशन कस्तो हुनुपर्छ
Bi-xenon lens: स्थापना र आफ्नै हातद्वारा जडान
आगो गेट: उपकरणको विशेषता प्रजाति र सुविधाहरू